Halesi Khabar - Nepal News Portal
खोटाङ, १० असार । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि रु ८६ करोड तीन लाख ७७ हजार बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । नगर उपप्रमुख विशन राईले शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट तथा कार्यक्रममा चालुतर्फ अनुमानि... ...थप समाचार
खोटाङ, १० असार । रावाबेँसी गाउँपालिकाले रु ३८ करोड ३९ लाख २ हजार २३ बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्रबार सम्पन्न ११ औं गाउँसभामा गाउँपालिका उपप्रमुख कौशिला गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएक... ...थप समाचार
मेयरमा आफ्नै उम्मेदवारलाई हराएको भन्दै कास्की एमालेले गर्याे कार्वाही
पाेखरा, एमाले कास्कीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी तीन जना स्थानीय नेतालाई पार्टीको पद र संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको जनाएको छ। निलम्बनमा पर्नेमा पोखरा–३३ वडा कमिटीका उपाध्यक्ष महेश अर्याल, पोखरा...
एउटै वडाका ५२ काँग्रेस कार्यकर्ता नेकपा प्रवेश
कुकुर मारेको भिडियो फेसबुक मार्फत सार्बजनिक गर्नेलाई कार्वाहीको माग
एम्बुलेन्स दुर्घटनाका घाइतेको अवस्था चिन्ताजनक, आर्थिक सहयोगको याचना
खोटाङका जनप्रतिनिधीको टोली कुलमान सँग
शल्यक्रिया गरिएको सुत्केरीको हेलिकोप्टरबाट उद्दार
चुनावमा भोट हाल्न गाउँ हिँडेकी हजुरआमाको हत्या गर्ने नाति पक्राउ
खोटाङ, ९ असार । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्न गाउँ जानेक्रममा हजुरआमाको हत्या गर्ने नाति पक्राउ परेका छन् । खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–५ चिसापानी घर भइ हाल इटहरी उपमहानगरपालिका–१६ बालग्राम चोक बस्दै आउनुभएकी ७७ वर्षकी ...
किराँत ऐतिहासिकस्थल मझुवागढीलाई ‘फूलैफूलको पहाड’ बनाउने अभियान
शेयर कारोबार सुरक्षित बनाउन सरकारलाई एमालेको ध्यानाकर्षण
एसईई नतिजा: यो वर्ष दुई महिनामै सार्वजनिक गर्ने
किराँत राई खेलकुद संघ : तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी असार २१ र २२ दिक्तेलमा
रवी लामिछानेले खोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
देउवा सरकारको उपलब्धि : पेट्रोलमा २१ र डिजेलमा २७ रूपैयाँ बढ्यो
पहिला विद्यार्थीको, अहिले नगरको भविष्य बनाउने रेसमा खडेन्द्र
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरको अधुरा सपना पूरा गर्न बिणादेवीको उम्मेदवारी
खोटाङ, १० असार । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि रु ८६ करोड तीन लाख ७७ हजार बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । नगर उपप्रमुख विशन राईले शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट तथा कार्यक्रममा चालुतर्फ अनुमानित रु ६१ कर...
चन्द्रमामा पानी भएको पुष्टि
बंगलादेश गोदाम विस्फोट: मृत्यु हुनेको संख्या ४० पुग्यो
चीनले बनायो हिमाल, पर्वत चढ्ने अति खतरनाक रोबोट
बोल्ड अवतारमा गायिकाअन्जना राई
ग्ल्यामरस दुनियाकी रानी ज्योति मगर
अभिनेत्री गौतमले ‘घुँइचो’ मा काम गर्ने
मलाई प्राय : नयाँ मेकरले नै फिल्म अफर गर्नुहुन्छ : वर्षा सिवाकोटी
सेक्स गर्दा मज्जा आएन ? कसरी लिन सकिन्छ मज्जा ? जान्नुहोस
कविता : कवि पौडेलको “हिउँफूलको गाउँबाट”
सुनेको, देखेको र भोगेको : विकास केही त भएकै छ ।
खोटाङ, ७ असार । किराँत राई खेलकुद संघ केन्द्रीय समितिले तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । संघले खोटाङको संयोजन र व्यवस्थापनमा आगामी असार २१ र २२ गते दिक्तेलमा तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन ...
खेलकुद क्षेत्रलाई निराश पार्ने गरी बजेट आयो : नेकोस
दिक्तेल मेयर कप फुटबलको उपाधि योङ ब्वाइज क्लबलाई
जनताको हितविपरीतका जुनसुकै निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ : माधव नेपाल
एमाले महाधिवेशन : खेलकुद महासंघले २० हजार बढी सहभागी गराउने
लघु नाटक :- “प्यारेन्ट्स डे”(अभिभावक दिवस)
दिक्तेलमा कुकुर आतङ्क : कुकुरको टोकाइबाट एकै दिन १५ जना घाइते
किन गरिन्छ चुम्बन, कहाँबाट सुरु भयो यसको चलन ?
पाइलटको मोबाइलमा घण्टी गइरहेको छ, टिटी लेक वरपर खोजिरहेका छौं ः नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
इन्जिनियरलाई ‘सौर्य फोटोभोल्टेइक वाटर पम्पिङ सिस्टम डिजाइन’ तालिम
सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीको अनुगमन गर्न समिति गठन
दिक्तेलमा नेपाल टेलिकमको ‘फाइवर टु दि होम’ सेवा शुरु
बाघको आक्रमणबाट २३ वर्षीया बस्नेत बेपत्ता
इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्र जैसवालको शव फेला
एक महिनामा ६ सय सवारी साधन कारबाहीमा : चार लाख बढी राजश्व सङ्कलन
सुरक्षा गार्डमाथि खुकुरी प्रहार चार विद्यार्थी पक्राउ
काठमाडौं, १ मंसिर । अभिनेत्री तथा मोडल एलिजा गौतमले ‘घुँइचो’ मा काम गर्ने भएकी छिन् । उनले आफ्नो करिअरको दोश्रो चलचित्र साइन गरेकी हुन् । क्यानडाबाट फर्किएको केही समयपछि एलिजाले नयाँ चलचित्र साइन गरेकी हुन् ।
उनी रामजी दैलेखीको निर्माण गर्ने चलचित्र ‘घुँइचो’मा काम गर्ने पक्का भएको छ । निर्माता दैलेखी र नायिका गौतमले संझौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आरजे म्यूजिक एण्ड मिडियाको ब्यानरमा बन्न लागेको यो चलचित्रले एउटा दुर्गम गाउँको यूवाको अमेरिकासम्मको यात्रा देखाउन खोजिएको छ ।
अभिनेत्री एलिजाले चलचित्र साइन गरेपछि खुशी हुँदै आफूले लामो समयदेखि यस्तै कथाको प्रतिक्षा गरिरहेको बताएकी छिन् ।
घुँइचोमा खोजे जस्तै कथा पाएपछि काम गर्न तयार भएको उनको भनाई रहेको छ । निर्माता दैलेखीले नायिका गौतमसँग संझौता भएको र अन्य कलाकार पनि चाडै फाइनल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं, ३० कातिक । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी दुई वर्षपछि चलचित्र क्षेत्र फेरि चलायमान हुन थालेकोमा उत्साहित छिन् । कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षसम्म चलचित्रमा काम गर्न नपाउँदा निराश रहेकी वर्षा अब भने चलचित्र बनाउने विषयमा उत्साह देख्दा खुशी लागेको बताउँछिन् ।
चलचित्र क्षेत्र विस्तारै चलायमान हुँदै जाँदा वर्षालाई पनि चलचित्रको अफर आइरहेको छ । वर्षा भन्छिन्, ‘अहिले जता जाँदा पनि चलचित्र बनाउने विषयमा नै कुरा भएको पाउँदा खुशी लाग्छ । मलाई नयाँ मेकरहरुले नै बढी अफर गर्नुभएको छ । शायद, मेरो काम देखेर र विवादमा खासै नपरेका कारणले पनि हुनसक्छ ।’
नयाँ निर्माताहरुबाट चलचित्रको छायांकनको क्रममा गर्ने सम्मान पनि राम्रो हुने उनको अनुभव छ । ‘यसैले पनि म आफूलाई कथा मन परेको खण्डमा ब्यानर नहेरी काम गर्न राजी हुन्छु,’ उनी भन्छिन् ।
वर्षाले अभिनय गरेका चारवटा चलचित्र रिलिज हुने क्रममा छन् । ‘लक्का जवान, परदेशी २, मनसँग मन, ए साथी सुन’ चलचित्रको रिलिजको पर्खाइमा रहेकी वर्षा आफूलाई पहिलेदेखि नै व्यावसायिक चलचित्रमा खासै मन नगएको सुनाउँछिन् । ‘व्यावसायिक चलचित्रले फाइदा धेरै नगरेपनि घाटा पनि नहोला भन्ने सोचले मैले काम गरें । तर, मलाई आफ्नो अभिनय देखाउन पाइने चलचित्रमा नै बढी काम गर्न मन लाग्छ,’ उनी भन्छिन् ।
वर्षाले आफ्ना रिलिज हुन लागेका चार चलचित्रमध्ये ‘परदेशी २’बाट बढी आशा राखेको बताइन् । ‘यो चलचित्रमा मेरो लामो भूमिका छैन,’ वर्षा भन्छिन्, ‘तर, जति भूमिका छ त्यसलाई दर्शकले लामो समयसम्म सम्झनुहुन्छ । जसरी पशुपति प्रसादमा छोटो भूमिका गर्दा पनि दर्शकले सम्झिनुभएको छ ।’
खोटाङ, १७ पुस । नेपाली सँगीत क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेका गायक सर्जुन राईको स्वरमा नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । म्युजिक भिडियोमा समेत अब्बल सर्जुनसँगै सानु तामाङको स्वरमा ‘दैलो’ बोलको म्युजिक भिडियो आइ म्याक्स मोसन पिक्चरको युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
सार्वजनिक गीतको शब्द तथा सँगीत विश्वराज राई मास्टर मिक्सिङ रोमन बज्राचार्यको रहेको छ । लोकपप शैलीको गीतको भिडियोमा नग्मा श्रेष्ठ, रुपेश राई र सीता राईको अभिनय रहेको छ ।
खोटाङको रमणीय स्थानहरु रुपाकोट, बुइपा, लेक्पा, मुढे, नुनथला, तुवाचुङ जयरामघाट लगाएतमा ठाउँमा खिचिएको भिडियोको निर्देशन तथा छायाङ्कनमा अनिल के मानन्धरको रहेको छ । लोकपप शैलीको यस गीतले बिहे गरेर लाहुर गएको श्रीमानलाई श्रीमतीले कतिसम्म माया गर्छन् र कतिसम्म कुर्छन् भन्ने विषयलाइ प्रस्तुत गरिएको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइपा स्थायी घर भएका गायक राईले आधा दर्जनबढी गीतमा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय गायक राईको आफ्नै स्वरमा रहेको गीत ‘दैलो’ले दर्शक तथा स्रोताको मन जित्न सफल भएको छ ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । https://www.youtube.com/watch?v=0sanieW3-X4&feature=emb_title
गायक सर्जुन राईको ‘दैलो’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेता रमेश पौडेलको राष्ट्रवादी गीत ‘मुर्झिएका सपना’ सार्वजनिक भएको छ । राजेश पायल राईको स्वर र शान्तिराम राईको संगीतमा रहेको ‘मुर्झिएका सपना’सार्बजनिक भएको हो । बुधबार सार्वजनिक गीतमा पौडेलले शब्द कोरेका छन् र्। किरण क्रियशनले यूट्युबमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् भने, अमोश तामाङ्गले लयबद्ध गरेको गीतलाई एक्सन रेकडिङ्गले रेकर्ड गराएको हो ।
राष्ट्रवादी गीत ‘मुर्झिएका सपना’मा स्वंय गीतकार रमेश पौडेलले अभियन पनि गरेका छन् । गीतमा रमेश पौडेलसहित दर्जन बढि कलाकारको उपस्थिति छ । गीतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राष्ट्रवादी कामहरुको चर्चा गरिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गुमेको भुमी नंक्शा संशोधन गरि सार्बजनीक गरेको लगायतका महत्वपूर्णं निर्णय गरेर आम नेपालीलाई राष्ट्रवादी बन्न प्रेरणा दिएको कुरालाई चर्चा गरिएको छ ।
सत्तारुढ दलको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका सह–संयोजक समेत रहेका नेता पौडेलको ‘मुर्झिएका सपना’को भिडियो यस्तो छ हेर्न यहाँ क्लीक गर्नुस ।
युवा नेता रमेश पौडेलको राष्ट्रवादी गीत ‘मुर्झिएका सपना’ सार्वजनिक (भिडियोसहित) हेर्नुस र एक शेयर गर्नु
झमक घिमिरेको जीवनमा आधारित फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
सिंगारिँदै एमाले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन स्थल
हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा रात्रिकालीन खेल
प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च छिर्नै नदिने वकिलहरूको तयारी (तस्वीरहरु)
नेकपा एमाले खोटाङको कार्यालय भवन उद्घाटनपछि अध्यक्ष रामप्रसाद दंगालको सफतमा देखिएको दृष्यको (फोटोफिचर)